Ikhabhinethi yeHlathi eZinzo / Miško ramuma
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguEgle
UEgle ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ikhabhinethi ikwindawo ekude nethe cwaka, ijikelezwe lihlathi elunxwemeni lwechibi. Rhoqo ngorhatya ukuba akusiyo ungonwabela ukutshona kwelanga okumangalisayo. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yokonwaba, ukude kunye nendawo yangasese. Ikhabhinethi ixhotyiswe kakuhle, uya kufumana zonke izinto eziyimfuneko ngaphakathi. Le ndawo ilungile kumaqabane, abantu abahamba bodwa, iintsapho (kunye nabantwana), kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya) kunye nabo bonke abathandi bendalo.
Ukubaleka okufanelekileyo kwingxolo yesixeko kunye nesantya esiphambeneyo. Kwabo bafuna imfihlo. Asihlali apha, nezinye iindwendwe aziyi kwamkelwa ngaxeshanye, ngoko ke i-cabin iya kuba yeyakho kuphela.
Umbuki zindwendwe ngu- Egle
Uxolo ukuba hayi ngalo lonke ixesha ndiza kudibana nawe buqu.
Kodwa ndiya kwenza konke okusemandleni am ukukuphendula ngokukhawuleza ngefowuni, itekisi okanye nge-imeyile.